अमेरिकाले बनायो चीनको सम्भावित हमलाबारे थाहा पाउने नयाँ सफ्टवेयर, भविष्यवाणी पनि गर्ने — Imandarmedia.com
एजेन्सी। अमेरिकाले प्रशान्त महासागरमा चीनका गतिविधि निगरानी गर्ने एउटा सफ्टवेयर विकास गरेको दाबी गरेको छ। प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी कमान्डरहरुले विकसित गरेको सो सफ्टवेयरले,
सो क्षेत्रमा सैन्य डिल र अन्य अमेरिकी समर्थनका गतिविधिलाई चिनियाँ सरकारले कसरी प्रतिकृया जनाउँछ भनेर भविष्यवाणी गर्नेछ। त्यस्तै, प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको सम्भावित हमलाबारे पनि सफ्टवेयरले पूर्व जानाकारी दिनेछन्।
मंगलबार अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री क्याथलिन हिक्सले हवाईस्थित इन्डो प्यासिफिक कमान्डको भ्रमण गरेर सो सफ्टवेयरबारे जानाकारी लिएकी थिइन्। रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीहरुका अनुसार सो सफ्टवेयरले रणनीतिक टकरावलाइ पनि अनुमान गर्छ।
त्यस्तै, सफ्टवेयरले सन् २००० को सुरुदेखिका तथ्यांक विश्लेषण गर्नुका साथै अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धलाई असर गर्ने महत्वपूर्ण गतिविधि निगरानी गर्छ। कम्प्युटरमा आधारित,
सो प्रणालीले प्रशान्त क्षेत्रमा चीनका उत्तेजक गतिविधिबारे अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले पेन्टागनलाई जानाकारी दिनेछ। केही दिनअघिमात्र अमेरिका र क्यानडाले प्रशान्त क्षेत्र र ताइवान,
टापुको शान्ति र स्थिरतामा अमेरिकाले धावा बोलेको चीनको सेनाले आरोप लगाएको थियो। प्रशान्त क्षेत्रमा चीनका अस्वभाविक गतिविधिका कारण नयाँ प्रविधिको विकास गर्न बाध्य भएको अमेरिकाले जनाएको छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले चीनले ताइवानमाथि अधिकार जमाउन कुनै पनि कदम चाले ‘भयानक परिणाम’को सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार उनले चिनियाँ नेतृत्वले ताइवानको मुद्दाबारे संकटलाई निम्तो नदिने विश्वास व्यक्त गरे।
रोयटर्स नेक्स्ट कन्फेरेन्समा बोल्दै ब्लिन्केनले चीन ताइवानको स्वायत्तता खोस्ने दिशामा अग्रसर भइरहेको बताए। उनले ताइवानलाई अमेरिकाले आफ्नो रक्षा गर्नका लागि सघाउने बताए।
उनले चीनले ताइवानको स्वायत्तता खोस्ने प्रयास गरे कसैका लागि पनि राम्रो नहुने बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले ताइवानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन प्रयास गरिरहेको छ।
यद्यपि चीनले भने ताइवान आफ्नो भूमि भएको बताउँदै आएको छ। साथै ताइवानको मुद्दा आफ्नो आन्तरिक विषय भएकाले यसमा दखल नदिन उसले अमेरिकालाई चेतावनी दिइसकेको छ।
यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई ताइवानको मुद्दामा दखल दिनु भनेको आगोसँगै खेल्नु जस्तै भएको चेतावनी दिएका थिए। पछिल्लो समय ताइवान मुद्दाबारे अमेरिका–चीनबीचको तनाव निरन्तर बढ्दो छ।
चीनले बिहीबार अमेरिकी पक्षलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नजिकको जासुसी, हस्तक्षेप, उत्तेजना र बल प्रदर्शन लगायतका कार्यहरू बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ,
कर्नेल वु छियानले युएसएस कनेक्टिकट आणविक पनडुब्बी झडपका सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको आधिकारिक प्रतिक्रियाका रूपमा उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।
पहिलो, अमेरिकी पनडुब्बीको नेभिगेसनको उद्देश्य के हो ? दोस्रो, टक्करको सही स्थान के हो ? अन्तमा, यसले आणविक चुहावट वा समुद्री वातावरणीय प्रदूषण निम्त्यायो कि निम्त्याएन ?
आधिकारिक चिनियाँ सैन्य समाचार मिडिया केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। चीनले यस घटनाको मूल कारण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य जहाजहरूद्वारा गरिएको व्यापक र उच्च तीव्रताको नजिकको जासुसी,
हस्तक्षेप, उक्साहट र बल प्रदर्शनका साथै अमेरिकी ‘सैन्यकरण’ हो भन्ने विश्वास गरेको वूले टिप्पणी गरेका छन्। हामी अमेरिकी पक्षलाई त्यस्ता गतिविधिहरू तुरुन्तै बन्द गर्न आग्रह गर्दछौं, ताकि पर्खालमा आफ्नो टाउको नठोकियोस्’ वुले भने।
ताइवानको एयर डिफेन्स इन्टिग्रेशन जोनमा चिनियाँ सेनाको घुसपैठलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच बढ्दो तनावको बीचमा यो दुर्घटना भएको हो। संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगीहरुले क्यारियर,
स्ट्राइक ग्रुप २१ भनेर चिनिने यस क्षेत्रमा बलको एक प्रमुख बहुराष्ट्रिय प्रदर्शन गरिरहँदा कनेक्टिकट दक्षिण चीन सागरको वरपरको पानीमा सक्रिय रहेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।